Gịnị bụ USB3.1 HUB? | Huachuang Elektrọnik
AKW COMKWỌ UKWU
Chọpụta ihe niile ịchọrọ ịma gbasara USB-C na ọdụ USB 3.1 ebe a. Kedu ihe dị iche? Enwere ọdịiche ọ bụla? USBdị Type-C bụ usoro njikọta nke ewebatapụtara na 2015. Typedị-A ga-anọchi anya ogologo oge, ka a ga-eji -dị C dochie ya. Ihe nkwakọba ndị a pere mpe ma enwere ike iji ya mee ihe abụọ - nke nwere ike ịbụ uru kasịnụ. Ya adịkwala mgbe ị ga-eleba anya otú e kwesịrị isi tinye plọg n'ọdụ ụgbọ mmiri - tinye ya!
Nchikota nke uru nke USB 3.1
Ugboro abụọ okpukpu abụọ dị ka USB 3.0
20x ngwa ngwa karịa USB 2.0
gbadoro gbakwunye na USB 3.0 & USB 2.0 ngwaọrụ
nnyefe ike ọzọ (900 mA) - enwere ike ịgba akwụkwọ
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na Mac ma ọ bụ laptọọpụ ọhụrụ ahụ nwere njikọ USB USB Type C, mana ngwaọrụ ngwụcha niile ka bụ USB 2.0 ma ọ bụ 3.0? Ma ọ bụ ọ bụrụ na enwere obere plọg pere mpe.
A na-akpọ ihe ndozi ahụ USB-C Hub. Igwe USB bụ ezigbo ihe ọzọ iji USB 3.1 ọdụ ụgbọ mmiri na Mac nwere ụdị USB meworo okenye. Ihe ndị a na-emetụta ebe a: eriri USB nke dị mkpụmkpụ na njikọ nkwụnye dị ole na ole karị, arụmọrụ ka mma. Ya mere ndi okacha amara na akwado gi ka itinye ya na otutu igwe n’usoro iji karie otutu ulo. Igwe USB C 3.1 na-eme ka njikọ nke ọtụtụ ngwaọrụ nwere njikọ USB 3.0 ma ọ bụ karịa na USB Type-C njikọ nke Mac na kọmputa ma ọ bụ akwụkwọ ndetu. Enwere ike iji ngwaọrụ ochie mee ihe na ọdụ dị otú a, mana ọ bụ naanị na ọsọ na ọsọ agbadoro maka ha.
Njikọ USB-C enwere na kọmputa m ochie?
Mba - ntinye USB-A ma obu USB-B (Micro-USB) adabaghi ​​na usoro ya di iche.
Njikọ USB-A merela agadi, ọ dabara na ngwaọrụ USB-C ọhụụ?
Mba - ntinye USB-C pere mpe.
Micro-USB na USB-C jikọrọ ọnụ?
Mba - ụdị njikọ njikọta dị iche.
Agaghị ejikwu ngwa ngwa USB 2.0 nke ochie site na iji ya na ngwaọrụ 3.1 dị ugbu a. N'ihi na breeki bụ interface nke enweghị kọntaktị dị mkpa iji ruo SuperSpeed ​​+ ebe a. Dịka ọ dị na ntughari site na USB 2.0 gaa na USB 3.0, USB 3.0 gaa USB 3.1 na-akwado azụ. Ọ ga-ewe oge tupu e guzobe ọkọlọtọ USB-C nke ejiri MacBooks na ndị ọrụ nwere ike ịme na-enweghị nkwụnye ọkụ. Ọ bụ ihe kwere nghọta na ngwa ndị a zụtara n'oge gara aga ka kwesịrị iji.
Ndi USB C ugbua
HuaChuang USB 3.1 Cdị USB USB
Site na USB 1.0 ruo USB 3.1 - mmepe ahụ na-adigide
Universal Serial Bus (USB) ewepụtala onwe ya dịka ọkọlọtọ nke nyocha ya na mmalite ya na-alaghachi azụ ogologo oge gara aga na teknụzụ kọmputa. N’afọ 1996, ụdị nke mbụ 1.0 mere ka enwe ike ijikọ ọtụtụ ngwaọrụ, dị ka ndị na-ebi akwụkwọ, diski diski ma ọ bụ nyocha, site na otu kọmpụta na-enweghị ịwụnye kaadi nkwụnye SCSI dị oke ọnụ n’oge ahụ ma ọ bụ nwee ịzụta ihe kwekọrọ. ngwaọrụ njedebe. Originaldị izizi ahụ nyeere aka ịfefe ihe ruru 1.5 ma ọ bụ 12 MB / nke abụọ. 2.0dị 2.0 nke nwere aha Hi-Speed ​​wetara ikike mbufe data nke 60 MB / nke abụọ na 2000. standardkpụrụ USB 3.0, afọ asatọ ka nke a gasịrị, a kpọrọ SuperSpeed ​​mmụba ọsọ ọsọ na 500 MB / nke abụọ.
Igwe USB ohuru ohuru enwere ya na nke ochie?
Ihe oma n’iru: Ngwa USB 2.0 nwekwara ike ịrụ ọrụ na USB 3.0. Nke a pụtara na, dịka ọmụmaatụ, mkpisi ebe nchekwa nwere ọdụ USB 2.0 nwekwara ike ịrụ ọrụ na USB 3.0 interface - agbanyeghị, enwere nsogbu na micro USB njikọ 3.0, ebe ọ dị ntakịrị karịa ma nwee ọkaibe na efere ntuziaka. . Dịka ọ dị na USB 2.0, USB 3.0 dabere na ngwa ngwa ngwaọrụ adịghị ike. Agbanyeghị, eriri USB 2.0 anabataghị eriri USB 3.0 - nke a bụ n'ihi kọntaktị ndị ahụ.
Na nchịkọta, nke a pụtara:
USB USB USB abụghị azụ dakọtara n’ihe gbasara ngwaọrụ nkwụsị
USB USB eriri USB nwere ike jikọọ eriri USB 3.0 na onye ọbịa USB 2.0
USB USB USB enweghị ike ijikọ ngwaọrụ USB 2.0 na onye ọbịa USB 2.0
USB USB USB enweghị ike ijikọ ngwaọrụ USB 2.0 na onye ọbịa USB 3.0
USB USB USB nwere ike jikọọ eriri USB 2.0 na USB 3.0 host
USB USB USB enweghị ike ijikọ ngwaọrụ USB 3.0 na onye ọbịa USB 3.0
USB USB USB enweghị ike ijikọ ngwaọrụ USB 3.0 na onye ọbịa USB 2.0
Ọdụ USB 3.1 na eriri USB Type-C ọhụrụ
Ndakọrịta, eriri na ihe egwuregwu njikọta - Ugbu a ọkọlọtọ USB 3.1 kwesịrị inye nkọwa doro anya. Site na mgbanwe site na USB 3.0 na USB 3.1, a na-ewepụta eriri njikọ ọhụrụ na ọkọlọtọ USB ọhụrụ: typedị njikọta ahụ na-anọchi ụdị ọkọlọtọ ochie A ma nwee ike itinye ya na akụkụ abụọ. Ọ na-enyekwa ọsọ ọsọ dị elu. Site n'enyemaka nke eriri USB, a na-ejikwa ngwaọrụ USB 2.0 na-arụ ọrụ na ụdị njikọ A na njikọ USB 3.1 na ụdị njikọ njikọta C na njikọ ya. Agbanyeghị, enwere nsogbu na ịnye ike mgbe ijikọ USB USB na 3.1 na ọdụ ụgbọ mmiri USB 2.0, ebe USB 3.0 abawanyela ugbu a site na 500 mA ruo 900 mA. Nwoke njikọta USB-C dịkwa obere karịa onye bu nke mbu. Ogologo ya kariri iri.
Apple ji USB Type-C dochie nghazi nke Thunderbolt
Ejiri tebụl Thunderbolt jikọtara ọnụ site na Apple na Intel, nke a na-ejikarị Apple Macs, ejiri oghere Type Type na USB 3.1 dochie ya. Site na nyocha a ọ ga-ekwe omume ijikọ nyocha. Mkpebi ihuenyo ruo 5k abụghị nsogbu maka njikọta. Anabatabeghị ma ụdị njikọ njikọta nke C yana ọkọlọtọ USB 3.1 ga-abụ eriri chaja nke mbụ na Europe. Na Machị 2014, Ndị omebe iwu European wepụtara ụgwọ nke ga-ewepụta ọkọlọtọ chaja maka ngwaọrụ mkpanaka site na afọ 2017. Ruo mgbe ahụ, nkwekọrịta gbasara ụkpụrụ ịkwụ ụgwọ eriri edo edo bụ afọ ofufo - ebe a, ndị na-emepụta ihe niile, ma e wezụga Apple, nke ahụ bụ naanị ụlọ ọrụ ya na eriri Lightning na-anaghị agbaso ọkọlọtọ ọ bụla wee sie ofe nke ya. N’onwe ya, onye na - ejikọ USB Type C na USB 3.1 nwere ezigbo ohere iji guzosie ike onwe ya dịka ọkọlọtọ ọhụụ n’ihi na onye na - ejikọ obere na - enye ohere njikọ dị warara na ngwaọrụ ndị ahụ, ọ gbalitekwala ọsọ ọsọ. Na mgbakwunye, onye jikọtara Cdị C na-ebelata tangle USB, ebe ọ nwere ike dochie ụdị USB jikọtara ọnụ niile gara aga ọ bụghị naanị n'ihi ọsọ njikọ ya, kamakwa ugbu a 900 mAh.